Musharaxiinta Puntland &Hogaanka Khaatumo oo isku waafaqsan wada hadal kuna kala duwan xiligiisa (Dhegayso) – Radio Daljir
Musharaxiinta Puntland &Hogaanka Khaatumo oo isku waafaqsan wada hadal kuna kala duwan xiligiisa (Dhegayso)
Nofeembar 8, 2013 10:03 g 0
Nairobi, 9-2013, Musharax Cali X Warsame oo kamid ah raga u taagan xilka Madaxweyne ee Puntland oo Radio Daljir siiyey Waraysi dhinacyo badan taabanaya ayaa ku baaqay in doorashada ka hor la raadiyo gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn oo isimadoodu sheegeen inaysan Baarlamaan u dirayn Puntland.
Wuxuu sheegay ?inay sahlan tahay in la wada hadlo lana heshiiyo sida uu hadalkiisa u dhigay ,” Waxaan u aragnaa inay sahlan tahay waayo dadku waa dad ehel ah, waa dad aan shacabka waxba ka tirsanayn marka waxaan ku talin lahaa inay isu yimaadaan dhaqanku arintaasna la xaliyo,” ayuu yiri Cali X Warsame.
Isagoo ka hadlayey go’aankii Isimadda Sool, & Cayn ee ku aadanaa inaysan Baarlamaanka Puntland ka qaybgeli doonin ayuu sheegay in cabaqabad weyn aysan noqon karin hadii laga hawlgalo.
“Waxaan aaminsanahay inay jirto fursad ku filan, lagana wada hadlo waxyaabaha aasaasiga ah, anagu waxaan aaminsanahay inaan la iska qoran sida ay sheegeen xubnahoodii, xubnaha ka qaybgelaya Baarlamaanka cusubna waa inay noqdaan kuwo ay soo xuleen Isimadii soo jireenka ahaa,” ayuu yiri Cali X Warsame.
Musharax Cali X Warsame ayaa eedayn ujeediyey maamulka talada haya ee Puntland isagoo sheegay inuu carqaladaynayo shir ay qabsanayaan dadka deegaanka Sool, Sanaag & Cayn isagoo ugu baaqay hawlahaas inuu fududeeyo.
Ugu danbayn Cali X Warsame ayaa walaac ka muujiyey in sida hada wax kusii socdaan, wuxuuna ku baaqay in Isimadu isu yimaadaan oo go’aan adag qaataan.
Dhinaca kale Maxamed Yuusuf Jaamac (Indhsheel) oo kamid ah golaha Madaxtooyadda ee maamulka Khaatumo ayaa sheegay inuu aaminsan yahay wada hadalka Puntland & Khaatumo, hase ahaatee arintaas ayuu ku xiray marka uu Puntland isbedel ka dhaco.
“Shacabka reer Puntland & Khaatumo waa dad wada dhashoo walaalo ah, dad kala tegi karana maaha, dan dhaqaale, dan siyaasadeed, ama dan dhul, intuba waa ka dhexeeyaan wada dhalashada ka sokow, ayuu yiri Maxamed Yuusuf Jaamac (Indhasheel).
“Waan qabaa in la wada hadlo anigu, waxaanse ku talinayaa wada hadalka aan u dayno maamuladda cusub ee kasoo baxa labada meeloodba, iyo odayaasha dhaqanka,”ayuu ku daray.
Doorashooyinka Puntland waxaa ku xeeran duruufo siyaasadeed, hadal haynta ugu badan ayaa ah goboladda, Sool, Sanaag iyo Cayn, dadka falan qeeya doorashadda Puntland ayaa qaba in doorasho xalaal ah oo Puntland ka dhacdaa ay ku xiran tahay sida ay uga qayb qaataan Isimada soo jireenka ah ee goboladda Sool, Sanaag iyo Cayn lamana oga sida xaalku ku danbayn doono.
Amaanka iyo dhaq-dhaaqa ganacsiga Boosaso oo maanta caadi ah xili xalay la weeraray xabsiga dhexe
Soomaaliya oo ka qayb-gashay shir looga hadlayey xuquuqda aadanaha oo ku soo dhamaaday Brussels